Rev. Khin Khin Win – Full Gospel Assembly
Rev. Khin Khin Win
သိက္ခာတော်ရဆရာမ ကလျာခင်ခင်ဝင်းသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၆)ရက်နေ့တွင် U Dori Raj နှင့် ဒေါ်မာဂရက် တို့မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အိမ်အမှတ် (၉၇၀) (က)၊ မင်းရဲကျော်စွာ (၁)လမ်း၊ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ မွေးချင်းမောင်နှမ (၆)ယောက်အနက် တတိယမြောက်သမီးဖြစ်ပါသည်။ မူလတန်းပညာကို အမက(၁၂)၊ ရာဇသင်္ကြန်(၃)လမ်း၊ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်တွင် သင်ယူခဲ့ပါသည်။ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာကို အထက၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် သင်ယူခဲ့ပါသည်။
မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်နေရင်း ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းရောက်လာတယ်။ ၂၀၀၅ခုနှစ် (၁၀)လပိုင်းတွင် ခေါ်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။ ခေါ်ခြင်းရဲ့ နုတ်ကပတ်တော် ၂ ကော ၁၂: ၉ ခေါ်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော်မြတ် အတွက် လုံး၀ပါဝင်ဆက်ကပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒလမြို့နယ် ဧဝံကလိနယ်မြေတာဝန်ခံအဖြစ်၊ တမီလ်အစီအစဉ်၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် လက်ရှိအချိန်ထိ အသင်းတော်မှာ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါ
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် F.G.B.T.C ကျောင်းတက်ခဲ့ပြီး Diploma ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေ(၁၁)ရက် ၅လပိုင်းတွင် ဖုလ်ဂေါ်စပယ်အသင်းတော်၏ အစမ်းခန့် အမှုတော်အဖြစ် စတင် ဆက်ကပ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အချိန်ပြည့် အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် International School of Ministry (ISOM)၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်ဓမ္မလိုင်စင်အမှုတော်ဆောင်ကပ်ရရှိပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဖူးလ်ဂေါ်စပယ်
အသင်းတော်၏ နှစ် (၃၀)ပြည့်အခမ်းအနား၌ ဓမ္မသိက္ခာတင်မင်္ဂလာကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရူပါရုံ – လူအပေါင်းကယ်တင်ခြင်းရ၍ သမ္မာတရားသိစေရန်နှင့် ယေရှုမေတ္တာကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးစေရမည်။ စာတန်နိုင်ငံပြိုကျ ပျက်စီးရမည်။
ကိုင်စွဲသောကျမ်းပိုဒ် ၂ တိမောသေ ၂: ၁၅